ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : ( BE READY TO CRY) from ဒုတိယblog
“ ဒုတိယ ” blog http://dutiya.blogspot.com/ မှ ဖတ်မိတဲ့ နှစ်သက်မိသော ပိုစ့်တစ်ခု ကို ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။ ။
“ Be ready to cry ” ဆိုတဲ့ title ကြောင့် ဘာအကြောင်း များလဲ ဆိုပြီး ဒီ video ကိုကြည့်ဖြစ်တယ် ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ အကြောင်းလဲ မဟုတ်ဘူး ၊ ကိုယ်နဲ့ လဲ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ video စစချင်းမှာ ပါတဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့မျက်နှာ ၊ သခင်ကို ပြေးကြိုတဲ့ ခွေးလေး နဲ့“ I missed you too daddy ” လို့ ပြော လိုက်တဲ့ ကောင်လေးတွေ ကို ကြည့်ပြီး တာနဲ့ဒီ video က ကျွန်တော့်ကို တကယ် မျက်ရည်ကျ စေတယ် ။ ကျွန်တော် အိမ်နဲ့ ဝေးနေတာ ကြာပြီး မို့ လို့ လဲ ပါမှာပါ ။
ဒီ video တွေကို ကြည့်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်က ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်း တစ်ပုဒ်ထဲက “ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း မွန်ပြည်သစ် ပါတီ တပ်သားတစ်ဦးက သူတောထဲ ပြန်သွားရတော့ မှာမို့သူ့ ရဲ့ ဇနီးနဲ့ ကလေး တွေကို စောင့်ရှောက် ပေးဖို့ကျွန်တော်ကို မှာခဲ့တယ် ” ဆိုတဲ့ စာ ကြောင်းကို ပြန်သတိရ မိတယ် ။
မွန်ပြည်သစ် ပါတီဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ အစိုးရနဲ့အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော်သိတဲ့ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်က သူနဲ့့ သူ့သူငယ်ချင်း အချို့ကျောင်းပြီးတာနဲ့မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ဝင်ဖို့စီစဉ်ထား ပေမဲ့ ၊ သူတို့နောက်ဆုံးနှစ်မှာ မွန်ပြည်သစ် ပါတီက ငြိမ်းချမ်းရေး ယူခဲ့တာကြောင့် အဲဒီနေ့ မှာ မျက်ရည်ကျတဲ့ အထိ ဝမ်းနည်းခဲ့ ရကြောင်း ပြောပြဖူးတယ် ။
မွန်ပြည်သစ် ပါတီဟာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲစဉ် တုန်းက မွန်ကျေးရွာတွေ ၊ မွန်ဆရာတော်တွေ ဆီကို သွားပြီး ယခု ငြိမ်းချမ်းရေး ယူတာဟာ တော်လှန်ရေးကို စွန့် လွှတ်လိုက်တာ မဟုတ်ကြောင်း ၊ လက်နက်ချ အညံ့ခံ လိုက်တာ မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေး ပြသနာတွေကို နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့အဖြေရှာဖို့ကြိုးစားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း လိုက်လံ ရှင်းပြခဲ့တယ် ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေး ပြသနာတွေ အတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာဖို့အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး ။
နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့ ဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ အခါမှာလဲ မွန်ဆရာတော်တွေ ၊ အခြားသော မွန်အဖွဲ့အစည်းတွေ ၊ မွန်ပြည်သူတွေ ဆီက သဘောထားတွေကို တောင်းခံခဲ့တယ် ။ အားလုံးရဲ့သဘောတူညီမှု ၊ ထောက်ခံ အားပေးမှုနဲ့မွန်လူမျိုး တွေအတွက် အာမခံချက် ရှိတဲ့ ဥပဒေ မရှိသရွေ့လက်နက်စွန့် မှာ မဟုတ်သလို ၊ တပ်ကိုလဲ ဖျက်သိမ်းမှာ မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြတယ် ။
နယ်ခြား စောင့်တပ် ဖွဲ့ ဖို့နောက်ဆုံးရက် သတ်မှတ်ပြီး ဖိအားပေးမှု အထိ ဖြစ်လာတာကြောင့် မွန်ပြည်သစ် ပါတီက တပ်စခန်း အချို့ကို တောထဲ ပြန်လည် ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပေမဲ့လဲ ၊ အစိုးရတပ်တွေက စတင် မတိုက်ခိုက်လာ သရွေ့ ရရှိ ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသွား မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြတယ် ။
မြို့ ရွာတွေပေါ်မှာ ၁၅ နှစ်ကျော် နေထိုင်လာ ကြပြီးမှ မိသားစုနဲ့သားသမီးတွေကို စွန့် ပြီး တောထဲ တောင်ထဲကို ဘယ်သူမှ တော်ရုံ စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြန်မဝင် ကြပါဘူး ။ ပုံမှန်လစာ မရှိ ၊ မိသားစု တွေနဲ့ဘယ်တော့ ပြန်တွေ့ရမှန်း မသိပဲ ၊ ဘယ်တော့ ပြီးမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ တော်ရုံ ခံယူချက်တွေနဲ့ဘယ်သူကမှ ပါဝင်တာဝန် မယူ ကြပါဘူး ။
မြန်မာပြည်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းကြားရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မနိုင် စေချင်သလို ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ မရှုံးစေ ချင်ဘူး ။ တိုက်ပွဲတွေ ကိုသာ အမြန် အဆုံးသတ် စေချင်တယ် ။ တိုက်ပွဲဆိုတာ လူကြီးတွေက ပါးစပ်နဲ့စစ်ကြေငြာပြီး လူငယ်တွေက အသေခံ တိုက်ရတာပါ ။ ဘယ်တပ်က စစ်သားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့မှာ သူတို့အိမ်ပြန်လာချိန်ကို စောင့်နေမဲ့ မိသားစုတွေ ၊ သူတို့ ကို ချစ်တဲ့ သူတွေ ရှိကြမှာပါ ။ တိုက်ခိုက်နေ ကြမဲ့ အစား တစ်ဦးကို တစ်ဦး အပြန်အလှန် နားလည်မှု ၊ လေးစားမှု တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းနိုင် ကြရင် ကောင်းမယ် ။
ကျွန်တော် မူလတန်းကျောင်းသား အရွယ်မှာ ရွာကို အလည် ပြန်တုန်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ဝမ်းကွဲအစ်ကို တစ်ယောက်က ရွာ ထဲ လိုက်ပြတယ် ။ အိမ်တစ်အိမ်ရှေ့အရောက်မှာ လူ ၅ ယောက်လောက် ဝိုင်းဖွဲ့ ပြီး ရယ်ရယ် မောမော စကားပြော နေကြတယ် ။ နှစ်ယောက်က အခြားသူတွေနဲ့မတူ ထူးခြားနေတယ် ။ ပုဆိုး နဲ့သာမန် ရှပ်အင်္ကျီကို ဝတ်ထားပေမဲ့ ပခုံး ကြိုးသိုင်းနဲ့စစ်ခါးပတ်တွေ ပတ်ထားကြတယ် ။ ပခုံး ကြိုးသိုင်းမှာ လက်ပစ်ဗုံးတွေ ချိတ်ထားတယ် ။ သူတို့ ရဲ့ခြေရင်းနားမှာ သေနတ်တွေ ထောင်ထား ကြတယ် ။ ကျွန်တော်က စိတ်ဝင်စားပြီး သူတို့ က စစ်သားတွေ လားလို့ကျွန်တော့် အစ်ကို ကိုမေးတော့ ဟုတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေတယ် ။ စစ်သားဆို ဘာလို့စစ်ဝတ်စုံ မဝတ်ထားတာလဲ ဆိုတော့ သူတို့ က မွန်စစ်သားတွေ လို့ ပြန်ပြောတယ် ။ ကျွန်တော့် အစ်ကို ပြောတဲ့ မွန်စစ်သား ဆိုတာကို ကျွန်တော် နားမလည်ဘူး ။ ကျွန်တော် သိတာက စစ်သား နဲ့သူပုန် နှစ်မျိုးပဲ သိတယ် ။ စိတ်ထဲကတော့ အလွယ်ပဲ မွန်ရွာမှာ တာဝန်ကျတဲ့ စစ်သားမို့ လို့မွန်စစ်သားလို့ခေါ်တာ ဖြစ်မယ်လို့အလွယ်ပဲ နားလည် ထားလိုက်တယ် ။
နောက် ၁၅ မိနစ်လောက် လမ်းထပ် လျှောက်တော့ ရွာမှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကို ရောက်တယ် ။ ဆေးရုံ အဆောက်အအုံရဲ့အဝင်ဝမှာ စစ်ဝတ်စုံနဲ့စစ်သားတစ်ယောက် စောင့်နေတယ် ။ အခြားတစ်ဖက်မှာ နောက်ထပ် တစ်ယောက် စောင့်နေတယ် ။ စစ်မေးတာတွေ ဘာတွေ မလုပ်ပါဘူး ။ ဒီတိုင်းရပ်ပြီး လုံခြုံရေး တာဝန်နဲ့စောင့်နေ ကြတာပါ ။ ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့စစ်သားကို မြင်တော့ ဟို မွန်စစ်သားတွေ ကျတော့ ဝတ်စုံမဝတ်ရဘဲ ၊ ဒီ မွန်စစ်သားတွေ ကျတော့ ဘာလို့ဝတ်စုံ ပြည့် ဝတ်ထား ရတာလဲ ၊ ဆေးရုံမှာ စောင့်ရလို့ လား ဆိုတော့ အစ်ကိုက ဒါက ဗမာစစ်သား ၊ ခုနက စစ်သားတွေက မွန်စစ်သားတွေ လို့ပြန်ပြောတယ် ။ ဘာကွာလို့ လဲ ပြန်မေးတော့ အစ်ကိုက မွန်စစ်သား ဆိုတာ တောထဲမှာ နေတဲ့ မွန်အဖွဲ့တွေဆီက စစ်သား ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ရှင်းပြတယ် ။ ဒါဆို ခုနက တွေ့ ခဲ့တာ သူပုန်တွေ လားဆိုတော့ တောထဲက မွန်စစ်သား တွေလို့ပြန်ပြောတယ် ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ တိုင်းရင်သား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို တိုင်းရင်းသားတွေက သူပုန်တွေလို့မခေါ်ကြ တာကို သတိထား မိခဲ့တယ် ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘယ်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ကမှ ငြိမ်းချမ်းရေး မယူရသေးပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ရွာကလဲ အမဲရောင် နယ်မြေထဲမှာပါ ။ ရွာသားတွေနဲ့စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောနေကြတဲ့ မွန်စစ်သားတွေကို ဘယ်သူမှ လာမတိုက် သလို ၊ ၁၅ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရင် ရောက်တဲ့ ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ စစ်သားတွေ ကိုလဲ ဘယ်သူမှ လာမတိုက် ကြဘူး ။ မသိလို့များလားလို့တွေးရအောင်ကလဲ မွန်စစ်သားတွေ ရွာထဲမှာ ရှိနေတာကို မသိတာ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဆေးရုံမှာ နေ့တိုင်း တာဝန်ကျတဲ့ စစ်သား ရှိတာကိုတော့ မသိပဲ နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ မွန်စစ်သားနဲ့ဗမာစစ်သားတွေက တစ်ဦးကို တစ်ဦး နားလည်မှုနဲ့တစ်ဖွဲ့ က ရွာထဲဝင်လာရင် အခြားတစ်ဖွဲ့ က ထွက်သွားတတ်ကြောင်း ၊ တစ် ဖွဲ့ က ဒီလမ်းကြောင်းက သွားနေရင် အခြားအဖွဲ့ က တစ်ခြား လမ်းကနေ ရှောင်ပြီး သွားတတ် ကြောင်း ၊ မလွှဲ မရှောင်သာမှ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တတ်ကြောင်း ကျွန်တော့် အဖေ ပြောတာ ကြားဖူးတယ် ။
စစ်ပွဲတွေကြောင့် မိသားစုတွေ ခွဲခွာနေ ကြရတယ် ။ အချို့သူတွေလဲ သူတို့ ချစ်တဲ့ သူတွေကို အပြီးအပိုင် ခွဲခွာသွားခဲ့ ကြတယ် ။ ဘယ်တုန်းကမှ တိုက်ပွဲတွေနဲ့မကင်းခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲ သူတို့ ချစ်တဲ့ သူတွေအတွက် မျက်ရည်ကျ ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုတွေ ဘယ်လောက် တောင်များ ရှိခဲ့ပြီးလဲ ? သေချာတာ ကတော့ နိုင်ငံ မငြိမ်းချမ်း သရွေ့၊ စစ်ပွဲတွေ မရပ်နိုင် သေး သရွေ့ဒီလို စိတ်မကောင်း စရာတွေ ဆက်ရှိနေ ဦးမှာပါ ။
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ နောက်ဆုံး ရက်တွေ ကျော်သွား ပေမဲ့လဲ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေက မိမိတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေကို ခိုင်မာစွာ စွဲကိုင်ထား ကြတုန်းပဲ ။ နယ်စပ်တွေမှာလဲ အခုအချိန်ထိ သေနတ်သံတွေ တိတ်ဆိတ် နေတုန်းပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီတိတ်ဆိတ် နေမှုက ကြာရှည်ခံမှာ မဟုတ်သလို ၊ ပြသနာတွေကိုလဲ ပြေလည်စေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်း သိနေကြတယ် ။ ဘယ်သူတွေက မှားတယ် ၊ ဘယ်သူတွေက မှန်တယ်ဆိုတာ ကတော့ သမိုင်း က အဖြေ ပေးလိမ့်မယ် ။ ။
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, June 27, 2010
ဖိုးတက် 28 June 2010 at 03:33
မွန်ရော ကရင်ရော အတူတူပါပဲ။ နွားအားဖ ဖက်ကလဲ ဒီလိုပါပဲ။ အပေါ်ကသွားပါဆိုတဲ့လမ်းကိုတောင် အောက်ခြေမှာ သတင်းရရင်သွားချင်မှ သွားကြတာ။ ဒါမှလဲ အသက်နဲ့ခန္ဓာ မြဲတော့မပေါ့ကွယ်။ သွားဆိုတဲ့ နေရာကို စက်ပေါ်ကနေပြီး ခြောက်လုံးအမှန်ပေးတယ်။ မြေပုံညွှန်း နေရာမှန်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူကတော့ ရွာထဲမှာနှပ်ချင် နှပ်နေမှာပေါ့ဝေ့။ ကောင်းပါလေ့။
I'm hoping to create my very own blog and want to learn where you got this from or what the theme is named. Thanks!
Here is my web site wilfredschul17.xanga.com